Wepamusoro gumi Dhanzi Flash Mobs | Fred Astaire
Wepamusoro gumi Dhanzi Flash Mobs
Munguva ino nyowani nyowani yekushamwaridzana padanho uye ekuchengetedza maprotocol, ngatitore kufamba pasi ndangariro nzira nemusoro gumi-anotaridzwa-anotamba maficha mafomu enguva dzese.
Pachinyakare, mabhanan'ana ekutamba ndee apo boka revanhu rinoungana munzvimbo yeruzhinji kuti vatore vanhu vane tsika yekutamba inotarisa. Yekutanga inozivikanwa flash flash yakaitika muNew York, New York, apo Bill Wasik, mupepeti mukuru weHarper's Magazine, akakurudzira vanhu kuti vaungane paDhipatimendi reMacy. Vamwe vakasangana munzvimbo yekutandarira yehotera, uye vamwe vachinyepedzera kuva vashanyi parwendo rwebhazi. Nekufamba kwenguva, mhomho dzevanhu dzakachinja kuti dzive nemitambo yekutamba yakawanda, makonzati kana zviridzwa zvinoita kuti vanhu vazhinji uye vape vanhu zororo rinoshamisa panguva yavo yezuva nezuva.
Kuputika kweCOVID-19 kwakatumira maAmerican kunzvimbo yekuisa vanhu kwavo kuti vabatsire kumisikidza runyoro uye kugara wakachengeteka. Kunyangwe nyika dzichivhurika zvishoma nezvishoma uye vanhu vachibuda munzvimbo dzavanogara, kuungana kwevanhu vazhinji kunoratidzika kunge kwakasiyana gore rino. Fred Astaire Dance Studios inokurudzira vanhu kutora maminetsi mashoma kubva muzuva ravo kuti vafarire mamwe maficha ane mukurumbira kubva pamazuva apfuura.
Tarisa uone iri flash mob muLiverpool, England, transit station. Vatambi vaiimbira kumatoni akasiyana siyana akarongedzwa neT-Mobile, hofori yefoni.
2. Pazuva rechando muMoscow, boka revatambi vanoridza ku "Kuisa paRitz," kushamisika kwevafambi vemuno.
3. Vadzidzi makumi mana vekuJerusalem Academy yeMimhanzi nekutamba vakafadza vanachiremba nevarwere apo vaimbi nevatambi vairidza Tchaikovsky "Waltz weMaruva" paSarah Wetsman Davidson Hospital Tower muJerusalem.
4. Pinda mumweya wezororo neiyi yekutanga mhomho yevanhu vane mamirioni makumi mashanu nemana ekuona. Musi waNovember 54, 13, vatengi vasina fungidziro vakawana kushamisika kukuru vachinakirwa masikati avo. Vanopfuura zana vatori vechikamu vakaimba mune ino inotyisa yeKisimusi flash mhomho.
5. Muchikamu chino, vatambi vanokatyamadza vashanyi kumusangano wekuBritain wemotokari nekusimbisa nhoroondo yemimhanzi yenyika.
6. Vakadzi vasina murume muLondon vakabatana paPiccadilly Circus kuti vaimbire rwiyo rwaBeyonce rwunonzi, "Vakadzi vasina murume."
7. Pazuva rakanaka muSydney, Australia, vatambi vakaungana pachiteshi kuti vatore nzvimbo yavo ku "Uptown Funk" naMark Ronson.
8. Kuratidzira tsika dzevaIndia, vatambi vane mari vakapfekedzwa vemuBy Bollywood vakatora danho mukati meguta reNew York City kuTimes Square muna2009. Vatambi vazhinji veHollywood vakauya kuzokudza "Bollywood Hero," chikamu chine zvikamu zvitatu pahushumiri hweIFC.
9. Mhomho inopenya yakakwira muSeattle's Westlake Park. Boka rakaimba rwiyo rwakakurumbira kubva kune yakanyanya kuterevhizheni show, "Glee."
10. Chekupedzisira asi zvirokwazvo chisiri chidiki, tarisa iri mhomho yevanhu vanoita mutambo wekutamba kuna Michael Jackson kuStockholm, Sweden.
Rongedza A Ballroom Dhanzi Chidzidzo Nhasi
Kana uchiona vatambi, vaimbi nevaimbi vachikwenya zvinhu zvavo mumigwagwa yakabatikana zvinokukurudzira kuti uwedzere kutamba kwako, bata Fred Astaire Dance Studios kuti udzidze zvakawanda nezve yavo balletroom lineup. Fred Astaire Dance Studios inopa zvidzidzo zvekutamba zvebhora kune vanhu uye vakaroorana pamazera ese uye matanho erwendo rwavo rwekutamba. Iyo Enfield, Connecticut-yakavakirwa yekutamba studio franchisor inozvidzivirira payo yekutamba makirasi ekutamba anodzidziswa nevanozivikanwa vatambi vekudhanha mune inodziya uye yekugamuchira mamiriro. Kutamba kweBallroom kunobatsira kunatsiridza hupenyu nekuvandudza hutano hwepanyama, hwepfungwa uye hwemagariro evatori vechikamu.